I-Crello: Isihleli se-Pay-As-You-Go Graphics esinezinkulungwane zezifanekiso ezinhle | Martech Zone
Singabalandeli abakhulu be- Depositphotos, isithombe sesitoko esingabizi, ingcaca, nesisombululo sevidiyo. Kungakho sibafake ohlwini lwabaxhasi futhi siqhubeka nokukhuthaza insiza yabo kusayithi lethu namakhasimende ethu. Vele, nathi sinxusa. Ithimba elisekele iDepositphotos manje selisungule Crello, umhleli wokubuka wamahhala onikwe amandla ngezigidi zezifanekiso ezinhle.
Okukhumbuza i- Canva (ngaphandle kwesidingo sokubhalisa), Crello inikeza ngaphezu kwama-10,500 izithombe zamahhala, kufaka phakathi izithombe, izithonjana, amaphethini, amaveji, amafreyimu, ubujamo nemifanekiso. Izici ezikhokhelwayo zibiza kufika ku- $ 0.99 lilinye, futhi ukusetshenziswa kwezithombe akunamkhawulo, ngakho-ke into ekhokhelwayo ihlala itholakala ukuze isetshenziswe unomphela.
Crello isiza abanselele ngemidwebo ukudala izithombe ezimangazayo zenkundla yezokuxhumana, amabhanela ezikhangiso, amaphosta, izihloko ze-imeyili, namanye amafomethi athandwayo. ICrello ifaka nesihleli sesithombe esigcwele ukuze ukwazi ukulayisha nokuguqula izithombe zakho zangemuva.
Izici zeCrello zifaka:
Ikhithi yokuqalisa elula - iqoqo lama-templates wama-6,000+ wamahhala, izinto zokwakha eziyi-10,000 +, nezithombe ezingaphezulu kuka-60,000,000 zesinqumo sesitoko.
Amafomethi wokukhipha - Amafomethi angama-29 anamasayizi asethwe ngaphambilini, kufaka phakathi Izikhangiso ze-Facebook, Amakhava we-Facebook, Okuthunyelwe kwe-Facebook, i-Youtube Channel Art, i-Twitter Posts, i-Twitter Headers, i-Instagram Posts kanye ne-Instagram Ads.
Personal thinta: inketho yokulayisha izithombe namafonti akho ukudala okuqukethwe okuhlukile.
Ukulungiswa: iqoqo lemiphumela yokubuka nezihlungi ukuguqula isithombe.
Izincwadi zokusebenzisa eziningi: izinto ze-premium ezithengiwe zihlala zitholakala ukuze zisetshenziswe futhi.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi okuqukethwe okubukwayo kusebenza kangcono izikhathi ezingama-4.4 kunombhalo ocacile kuzinkundla zokuxhumana, futhi izithombe zekhwalithi ephezulu zinomthelela omuhle ekuzibandakanyeni.
I-Crello ingasiza abantu ngaphandle kwesizinda sokuqamba imidwebo, abafuna ukuthuthukisa kalula ikhwalithi yokuqukethwe kwabo okubukwayo, nakho okusiza ukugcina ukutholakala kwemithombo yezokuxhumana okusebenzayo.
Yakha Umdwebo Wakho Wokuqala!
Tags: i-canvacrelloamadingaizikhangiso ze-facebookAmakhava e-Facebookokuthunyelwe ku-facebookihluzoIzikhangiso ze-InstagramOkuthunyelwe kwe-Instagramisihleli sesithombeIzihloko ze-TwitterOkuthunyelwe kwe-TwitterIsihleli SokubukaUbuciko besiteshi se-YouTube